SEO Humor: Mampihomehy ny tantara an-tsary avy any Dilbert
Zoma, Jona 24, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ry namana tsara, Shawn Schwegman, nandefa ity sarimiaina Dilbert ity:
Ny resaka nifanaovana dia mendrika hamerina ihany koa:
Rehefa manomboka mamaky vazivazy i Dilbert momba ny fananganana rohy dia fantatrao fa manana olana i Google (ary lasa nalaza be ny SEO) ”, hoy ihany izy manam-pahaizana momba ny fikarohana eo an-toerana Andrew Shotland.
Hevitra tsara izany. Ny orinasa rehetra mitady ny fananganana ny fisian'izy ireo dia manaiky fa miaina sy maty amin'ny alàlan'ny fanovana rohy mifandraika amin'izany izy ireo. Ny serivisy fitaterana lozam-pifamoivoizana dia hita hatraiza hatraiza ary hametraka ny tetikadin'ny motera fikarohana iray manontolo amin'ny rohy tsy misy ifandraisany apetraka ao anaty paositra mandeha ho azy, lahatsoratra misy mekanisialy amin'ireo tranonkala misokatra amin'ny rohy phising, pôrnôgrafia ary viagra. Sorohy toy ny pesta izy ireo ary aza alaim-panahy amin'ny tombony azo amin'ny fotoana fohy. Rehefa mandeha ny fotoana, Google dia hanohy hampiharihary ireo ary ny tranga tsara indrindra dia ny tsy firaharahana ireo rohy ary very ny volanao. Ny tranga ratsy indrindra dia nalevina tao anaty index ianao ary maharitra amam-bolana na taona maro vao hahazo fahefana indray.
Raha tena mila backlink ianao dia ataovy amin'ny alàlan'ny fanoratana atiny tena tsara, fizarana an'izany amin'ny alàlan'ny media sosialy sy horonan-tsary, mamolavola Infografika, bilaogy vahiny, ary ampiasao orinasam-pampielezam-baovao tsara izay hampiharihary anao amin'ny famoahana indostria manam-pahefana.
Tambajotra sosialy nomen'ny isa